N’ime vidiyo vidyo wepụtara n’oge gara aga, Matt Cutts kwuru na uche SEO banyere ụlọ njikọ bụ otu n’ime echiche ụgha kachasị na ụlọ ọrụ. Ви можете побачити, що Kedu ihe bụ echiche ụgha na ụlọ ọrụ SEO, Matt depụtara isi ihe atọ banyere isiokwu:
Оптимізація алгоритму оптимізації мікромеліта на даних про незагачі.
Панда Mmelite на Penguin abụghị maka obere ego Google nwere.
На, не, a Nchịkọta Barry Schwartz на vidiyo ahụ bipụtara на Ala Nchọgharị Ọchọ.
Ọ bụ ezie na # 1 bụ eziokwu n’ezie, M onwe m na-eche echiche # 2 na # 3 bụ фігня.
О доро будь-що, я хочу, щоб почали працювати на SEO-сетці, будь-ласка, будь-ласка, будь ласка, користувач Google Метт Кеттс (будь-ласка, будь-ласка, і заробляйте його на сайті CopyBlogger Google+).
Ні, що не відповідає, Метт Куттс kwuru na ya Agaghị atụ anya ka njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ wepụtara wepụtara iji nweta ọkwa weebụsaịtị. SEO Pressor guzobere, Daniel Tan, kwup ktara nkwupụta ahụ, tọhapụrụ ntọhapụ pịa ma jikọta на сайті MattCutts.com на iji okwu ahụ bụ "leasreepressmm".
Ма, я Арụ ọрụ.
Не знаходячись, MattCutts.com на-edozi №2 для okwu ọchụchọ "leasreepressmm" (lee foto n’okpuru).
Buru n’uche na okwu ahụ "leasreepressmm" adịghị na blog nke Matt ma ihe niile ọ na – ewe bụ njikọ njikọ ntanetị nke na – abịa site na saịtị mgbasa каса akpọrọ MarketersMedia. Nke ukwuu maka mgbasa ozi “press press enweghị uru ọ bụla n’otu weebụsaịtị”.
Nke a bụ nsonaazụ ọchụchọ nke “leasreepressmm” m jidere 5 червня 2013 року.
У вас є Matt Cutts і не знайшли SEO SEO? Gụọ na.
Я просто, laghachi na vidiyo nke kpọbatara m na post a.
M gwuru ntakịrị n’ime ụfọdụ SEC подачі на Akụkọ Google на-enweta его на nkeji ụzọ anọ nke Google n’ehihie a. Ọ ga-eju gị anya ịhụ ihe m hụrụ.
У будь-якому випадку, я думаю, що Метт Куттс може побачити:
“Ọtụtụ mmadụ na-eche на Google просто ого a tupu ha achọ ka ndị mmadụ zụta mgbasa щодо ọzọ. Ma nke ahụ abụghị eziokwu na Panda; ọ bụchaghị ikpe Penguin… ”
"Панда на Пінгвін, будь-що на-ага н’іху імені mgbanwe. Anyị agaghị echegbu onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ego ma ọ bụ mee ego ma ọ bụ ihe ọ bụla … "
Mana nke bụ eziokwu bụ na Google просто ego karịa mgbe emelitere Panda na Penguin. Ndị a bụ ọnụọgụgụ ndị m wepụtara na mkpesa gbasara ego gbasara ego Google nke na-enyochaghị. Biko pịa maka foto buru ibu, ndị ahụ bụ ọnụ ọgụgụ mara mma.
Dokwesighi ịbụ onye nghọta iji hụ na ego Google nwere na-eto, na-eto ma na-eto. Companylọ ọrụ ahụ просто ezigbo ego на Larry Page kwuru nke a na mmeghe nke akụkọ gbasara ego 2013 Q1:
“Будь-який не мав сімейства мамаліту, або в 2013 році, за його руру $ 14,0 іжері, руо 31% аф-аф”. Anyị na-agbasi mbọ ike na itinye ego na ngwaahịa anyị nke bu iji bulie ọtụtụ ijeri ndụ ndị mmadụ gburugburu ụwa. "
Maka akụkụ 13 годин тому, Googlenụọgụ dị na Google abụghị ihe efu. Lee ihe nchoputa nke m guru akuko Google.
Навчайте його сайт на ebe nrụọrụ weebụ Google mụbara maka afọ 3,25 aага. Онугу огугу нди ммаду не було 25% (дик огугу, Google achoputa ego ya dika otutu 3).
N’ime afọ 3.25 a, naanị otu ọdịda na mkpokọta Google, bụ nkeji iri na ise 1 afọ 2013 (ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2 afọ mgbe Panda gasịrị ụwa). На 1 квартал 2013 року, за допомогою Google, ви знайдете сайт (QoQ) на $ 14 419 за $ 19 969 за рік, 3% (більше бригади).
Adwords на Mgbasa відносно Mgbasa відносно abuo okpukpu abuo mgbe Panda 2.0
Ọ bụrụ na ị na-elekwu anya n’elu okpokoro ahụ, anyị na-ahụ "Ego a na-enweta site na nkwụnye ụgwọ" клацніть "(nke gosiri na-acha uhie uhie).
Не натискайте, натисніть, натисніть, натисніть Google, щоб побачити Google..
Nsụgharị м? Adwords ego Adsense.
Ви hụrụ etu ọnụ ọgụgụ ndị ahụ si arụ ọrụ nke ọma. Сайт на 2010 ruo 2013 Q1, ịịịịịịịịYYYYYYYYYYYYYYYYị n n nọọọọọọ (gụọ Adwords na Adsense) ụ 15%. Ntinye ego ntinye aka nke Google kwalitere na 28% (nke ahụ ka ọ bụrụ 13% bawanye) ozugbo Google Panda jere ụwa (Panda 2.0) на Eprel 2011.
Метт Куттс не мав ike ikwu ihe ọ bụla gbasara mmasị Панда на Пінгвін. Ihe si na Panda pụta bu ihe doro anya, Google просто ego karia mgbe mmbe mmelite Panda mechara. Ego Google nwetara site n’itinye Adwords na Adsense mụbara ụba mgbe Panda 2.0 na mmelite Penguin gasịrị.
Iji lee anya na ọnụọgụgụ dị iche iche, nke a bụ eserese abụọ m просто na Excel. Rịba ama na uto nzuzu on ntinye ego Google ji akwụ ụgwọ mgbe Panda 2.0 gasịrị.
Kedu ka Google si kwụọ ụgwọ ego ga-esi na-eto mgbe Panda gachara?
Kedu ka esi enweta mgbasa щодо mgbasa щодо Google на 2010 – 2013 рр. 1 квартал?
Нічого не бачив, Метт Куттс kwukwara banyere otu SEO на веб-сайтах, а також на пошукових системах. O nyeziri ndụmọdụ SEO ga-elekwasị anya n’ihe ndị ọzọ, dịka mgbasa щодо mmekọrịta na onye ọrụ weebụ, kama.
Chere obere oge. Я просто, Метт Куттс на-агва SEOs ka ọ ghara ilekwasị anya na … SEO?
Ndị ọkụ azụ, azụ azụ. Ndị ọrụ ubi, na-akụ mkpụrụ. Na SEOs, nke ọma, gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ụfọdụ tweakings website.
Ечіче, Метт на-erughị SEO ka mma SEO bụ nnukwu nghọtahie a.
Ее, mgbasa відносно mgbasa відносно налаштування веб-сайту dị oke mkpa. Ma, ha dị iche iche. SEO, SMM (mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze), SMO (mgbasa ozi mgbasa щодо ọha na eze), ahịa na-abaghị uru bụ akụkụ nile nke atụmatụ ahịa weebụ. Ось тільки SEO ga-eji lekọta ihe banyere SEO ma rụọ ọrụ karịa SMM?
SEO на-eche на ebuli saịtị maka nyocha dị mma na ọdụ ogologo oge. Na, njikọ ndị na-abata na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe niile na ọkwa saịtị mgbe Florida emelitere на 2003. Ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ; acha ọcha ma ọ bụ nwa ojii. Njikọ azụ bụ ihe na-eme ma ọ bụ na-agbaji saịtị; na njikọ bụ ihe anyị na-ebute na-ewu. Ọ bụrụ na azụ njikọ abụghị ihe dị mkpa (dị ka Mat kwuru), mgbe ahụ gịnị просто Ịzụ ahịa Google na – рекламні оголошення бара уру?
Enwela obi ike na ndị mmadụ n’Ịntanet – karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-abaghị uru nke edepụtara на Wall Street.
Немає нічого в WordPress